ALANO ESPAÑOL DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Alano Español Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Puma de Malandanza the Alano Español oo 10 bilood jir ah
Alano Español waa a molosser (eey weyn oo adag oo asalkiisu yahay Molossia). Waxay leedahay muuqaal horudhac ah oo fiisigiska guud ee isaga ku habboon gaar ahaan si fiican ugu ordaya xawaare sare muddo dheer iyo adkaynta ciyaarta duurjoogta ah ama lo'da muddo dheer markii la dalbaday. Qaab dhismeedka si wanaagsan loo dheellitiray, qafiska feeraha ayaa qalooca, ma ahan mid silloon, xabadka ayaa gaaraya heer xusulka, garbaha adag oo adag oo qallalaya. Lugaha hore way ka xoog badan yihiin kuwa dambe, waana toosan yihiin haddii laga fiiriyo xagga hore ama dhinaca. Cagaha ayaa guud ahaan aad uga weyn kan eyda kale ee isku cabirka iyo miisaanka ah. Faahfaahinta muuqaalka laf-dhabarka Alano ayaa xoogaa kor ugu kacaysa xagga dambe ee dhabarka ama, ugu yaraan, toosan, laakiin aan hoos u soo degeynin. Muruqyada ku yaal dhabarka dambe si fiican ayaa loo horumariyay lugaha dambe waxay muujinayaan xaglo aad u qeexan oo ku dhammaanaya cagaha adag. Dabada ayaa ka sii dhumuc weyn salka hoose ilaa hal dhibicna lama jaray marna maxaa yeelay waxaa loo isticmaalaa sidii roondada eeyaha leexleexashada leh oo sii qulqulaya marka la ugaarsanayo ama la shaqeynayo kalabar duurjoog ah ama lo 'duurjoog ah. Marka dabada la qaado hoose, midkoodna dhererkiisu kuma tiirsana aagga dambe eeyga. Caloosha ayaa dib loogu rogay gudaha, iyadoo siineysa muuqaal ciyaareed ka dheereeya noocyada kale ee molosser-ka culus. Qoorta waa xoog badan tahay, wayna ballaadhan tahay, waxayna muujineysaa laba garka oo laba jibbaaran oo aan waligood hoos u laallaaban karin. Madaxiisu waa brachycephalic (nooca Bulldog) qaab ahaan, laba jibbaaran muuqaal ahaan iyo muuqaal xasaasi ah. Afka waa balaaran yahay wuxuuna u taagan yahay qiyaastii 35% wadarta guud ee dhererka madaxa, oo leh joogsi taagan. Sanku waa weyn yahay, waasac yahay oo madow yahay sanka oo furan. Dhegaha badanaa waa la gooyaa, xoogaa wareegsanaa caarada. Dhegaha aan furaynin waa cabir dhexdhexaad ah waxaana lagu qaadaa wejiga. Alano waxay leedahay daaman xoog badan. Ilkaha waa balaaranyihiin, sifiican ayey ukalakalansanyihiin qaniinyada maqaska oo aad u adag oo adag ama qaniinyada maqaska la rogay. Qaniinyada hoosteeda waa la oggol yahay haddii ay tahay 2 mm ama ka yar. Markuu soconayo, Alano wuxuu leeyahay tillaabo khiyaano dhejis ah, sababtoo ah caado ay u leedahay inuu madaxiisa hoos u raaco, inyar oo tartiib tartiib ah uga soo boodo dhinac ilaa dhinac ah taasoo ka dhigaysa garbaheeda xoog badan oo muuqda Alanos waa molossers bilaa daal ah oo joogteyn kara joogteyn, sharaf, roonaan muddo dheer ah. Markay ordayaan, waa kuwo deg deg ah oo dabacsan, oo si buuxda u kala bixinaya gudaha iyo dibedda jidhkooda tallaabo kasta, oo ku kala soocaya caqabadaha xamaasad weyn, kana dhigaya sidii kuwo aan waligood daali doonin xitaa haddii looga baahdo inay masaafada sii hayaan. Midabada koofiyada waxaa ka mid ah cawl huruud iyo yeey, cowska iyo casaanka (ha ahaato midab khafiif ah ama mugdi ah), leh ama aan lahayn shaati (xarig) iyo maaskaro madow. Madow iyo tan - had iyo jeer leh shabeel calaamadeynta tan oo lagu sharaxay istaandarka Isbaanishka 'negro y atigrado' oo loo tarjumay madow iyo shabeel. Calaamadaha cad ayaa loo oggol yahay, laakiin kaliya sanka, qoorta iyo laabta, lugaha hoose, caloosha iyo cirifka cirifka cad waa inuusan waligiis ka kor marin jirka.
Dabeecadda Alano waa mid aad u xoog badan oo halis ah laakiin aad ayuu u xakameyn karaa sayidkiisa, isagoo u hoggaansamaya isaga / iyada. Noocani waa mid aad u jecel qoyska iyo dadka ay yaqaanaan. Sidoo kale waa mid dulqaad leh oo ku fiican carruurta. Iyagu waa kuwo la isku halleyn karo, xasilloon, aad u addeec badan oo jilif aad u yar. Si kastaba ha noqotee, Alano ayaa ku daawan doonta shisheeyaha shaki, iyagoo ku weeraraya digniin yar, kaliya marka xaaladdu u baahan tahay. Markaad haysato xayawaanka duurjoogta ah oo leh daamankiisa, iyadoon loo eegin cabirka, dabeecadda, ama gardarrada xayawaanka, Alano waxay gebi ahaanba iska indhatiraysaa dareenka sida xanuunka ama cabsida mana dhiibayso ilaa laga sheego inuu sidaas sameeyo ama ilaa uu ka gaaro amarada la siiyay. Alano waxay u dagaallami doontaa dhimashada si ay u raacdo amarrada, ula dagaallanto daaqda duurka ama dibiga ilaa dhammaadka. Iyagu waa cabsila'aan, daacad ah, daacad ah, hawlkar ah. Isku dheelitiran oo xasilloon, isku kalsoon oo leh xaddiga xanuun aad u sarreeya. Awood leh oo ilaalin kara, laakiin aan dagaal lahayn. Astaamahan noocyadan ah ayaan si buuxda u muuqan illaa uu xayawaanku ka gaadhayo bislaansho buuxda, taas oo inta badan dhacda marka eeygu gaaraan 2 1/2 sano ama ka weyn. Sababtoo ah noocani waxaa loo kariyay inuu ku shaqeeyo xirmooyinka koox ahaan, wuu fiicanyahay iyo Bulsho agagaarka eeyaha kale, ku raaxeysiga rooti wanaagsan, ciyaar iyo madadaalo. Si kastaba ha noqotee, Alano ayaan dib u laaban doonin haddii ay ka hortagaan iyaga. Alano Español, sida dhammaan noocyada noocyada mastiff, waa inay lahaadaan a milkiilaha xukuma yaa fahmaya dabeecadaha dabinka dabiiciga ah. Waxay ku fuuli karaan dhir geedo leh bisad-u ekaansho bisad oo kale waxayna awood u leeyihiin inay uga boodaan meelo dhaadheer meel sare oo taagan. Calanka ayaa noqon kara adag tahay in guriga la dumiyo , taas oo ka dhigaysa midabkan sida ugu fiican eey dibadda ah. Eeyaha yaryar ee Alano ayaa u janjeera calalin oo ka badso wax duminaya ka badan dhallaanka Alano eeyaha. Ujeedada tababarka eeygan ayaa ah gaadho xaalad hoggaamiye xidhmo . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo xirmadooda . Markii aan dadku waxay la nool yihiin eeyaha , Waxaan noqonay xirmadooda. Xirmada oo dhami waxay lashaqeeysaa hal khadadka hogaamiyaasha si cad ayaa loo qeexay. Adiga iyo dadka kale oo dhan WAA INAAD uga sarraysiisaan sida eyga. Taasi waa sida kaliya ee xiriirkaagu u noqon karo mid guuleysta.
Dhererka: Ragga 23 - 25 inji (58 - 63 cm) Dumarka 22 - 24 inji (55 - 60 cm)
Miisaanka: Inta udhaxeysa 75 - 89 rodol (35 - 40 kg) oo had iyo jeer muujiya is waafajin u dhexeeya cabirka iyo culeyska.
Noocani waligiis looma adeegsan muuqaal ahaan. Taabadalkeed waa eey qadiimi ah oo loo adeegsaday inuu si adag uga shaqeeyo wadanka xaalado qalafsan oo da 'ah, halkaas oo qofka kaliya ee awooda uu ku badbaadi karo. Tani waxay noqon kartaa sababta Alano Español ay u tahay mid aad u adkaysi badan, nooc caafimaad leh, oo aan u nuglayn inuu ku dhaco cudur kasta gaar ahaan. Mulkiilaha Curro wuxuu yiri, 'Markaad dhaawacanto ama aad xanuunsato, waqtigooda soo kabashada sidoo kale waa mid aad u fiican. Tusaale ahaan: Markuu jiray 80 maalmood Curro wuxuu qabtay parvovirosis (virus Parvo oo Isbaanish ah). Dhakhtarka xoolaha ayaan wax rajo ah i ka siin in Curro uu noolaado wax ka badan hal todobaad ka dib markii aan soo helay viruska. 5 maalmood uun bay ku qaadatay inuu is daaweeyo. ' Waxa weheliya Cane Corso, Alano waa mid ka mid ah taranka aad u yar ee molosser-ka ah oo aan hoos u dhacayn, caajisiin ama khuuxin.
Alano waxay ugufiican tahay ku noolaanshaha deyrka iyo jiifka banaanka, Alano waxay istaagi kartaa heerkulka kulul iyo qabow, qalalan iyo qoyaan dhib la'aan. Tusaale ahaan: inta lagu jiro xilliga qaboobaha ee gudaha Isbaanishka, heerkulku wuxuu gaaraa 30-ka hoose ilaa 20-ka sare (ka hooseeya eber Celsius). Waqooyiga Isbaanishka, huurka ayaa aad u sarreeya. Aagga dhexe cimilada ayaa ku qalalan jiilaal qabow iyo xagaa aad u kulul, halka koonfurtuna ay noqon karto mid qalalan ama qoyan (waxay kuxirantahay gobolka) laakiin leh heerkul dhexdhexaad ah ama kulul. Alano-ka Isbaanishka ah wuxuu had iyo jeer seexdaa banaanka wuxuuna la qabsan doonaa dhammaan cimiladahan dhib la'aan.
Haddii aan loo isticmaalin sida eeyaha shaqeeya, laakiin ay yihiin xayawaan gurijoog ah, waxaad u baahan tahay inaad siiso jimicsi badan oo maalinle ah. Uguyaraan saddex socod maalin kasta , midkood xoogaa ka yara sii dheer meel bannaan oo ay ku ordi karaan kuna ciyaari karaan, si ku habboon waddanka gudihiisa.
Qiyaastii 11-14 sano.
Qiyaastii 4 ilaa 8 eey
Alano waa eey gaagaaban oo u baahan qurxin yar. Ku cadayashada marmarka qaarkood burushka caagga ah ayaa ka caawin doonta inuu daadiyo timahiisa jilicsan ee jilicsan waxayna ka ilaalin doontaa inuu timo badan ku daadiyo guriga gudihiisa. Si kastaba ha noqotee, isagu waa eey dibadda ah waana inuu banaanka guriga ka baxaa inta badan. Maydho oo keliya markii loo baahdo maadaama ay ka saari doonto saliidaha dabiiciga ah ee maqaarka ku jira. Noocani waa celcelis daadiya.
Alano waa nooc aad u facweyn. Waxaa jira aragtiyo dhowr ah oo ku saabsan asalkiisa. Dadka badankood waxay la xiriiraan maanta Isbaanishka Alanos eeyaha Alanos (Alans) ay la yimaadeen markii ay ku soo duuleen Jasiiradda Iberian 406 AC. Eeyahaani kama soo jeedin nooc kasta oo maanta la yaqaan, laakiin taa beddelkeeda, waxay ahaayeen awooweyaal badan oo molosser ah oo maanta caan ah, sida Dane Weyn ama Dogue de Bordeaux. Waxaa jiri jiray eeyo Alano ah oo kaliya Spain, laakiin meelaha kale ee guud ahaan Yurub ee ay weerareen Alans, si kastaba ha noqotee, Isbaanishka kaliya ayaa ka badbaaday in ka badan 1500 sano ilaa waqtigaan la joogo. Koox ka mid ah dadka jecel Alano ayaa waqti badan ku qaatay horaantii 1980-meeyadii iyagoo ka shaqeynayay hadafka ah in la ogaado xaaladda dhabta ah ee tirada dadka ee Alano. Noocani waligiis kuma jirin bandhigyo eey ama lagu qurxiyo qurux. Waqtigaas qof kastaa wuxuu u maleynayay in Alano laga yaabo inuu ka dhuuntay inta badan duurjoogta ugaarsiga ugaarsiga iyo xayawaanka lo'da ee Spain. Carlos Contera iyo asxaabtiisuba waxay si qoto dheer u baareen dhamaan miyiga Spain iyagoo raadinaya halyeeygan molosser, kaasoo hoos u dhacu bilaabmay markii laga mamnuucay ka qayb qaadashadeeda dagaallada dibida sanadkii 1883. Waxay ka heleen xoogaa Alanos ah Extremadura (koonfur-galbeed Spain) iyo Castille (bartamaha plateau) laakiin sidoo kale dad aad u tiro badan oo deggan oo qiyaastii 300 Alanos ah oo ku nool Dooxada Encartaciones ee waqooyiga Spain. Kuwani waxay ahaayeen isla eeyo Alano ah oo loo isticmaali jiray qarniyo si loo maareeyo nooc ka mid ah noocyada duurjoogta ah ee lo'da ah. Dib u soo celinta taranka ayaa ka bilaabmay kii ugu fiicnaa Alanoskan. DNA-da waxaa falanqeeyay Kulliyadda Caafimaadka Xoolaha ee Jaamacadda Cordoba si loo hubiyo xaqiiqadooda. Isbaanishka Alano, waagii hore, waxaa loo adeegsaday shan ujeedo aasaasi ah:
Maareynta lo'da duurjoogta ah ama badhkeed.
Bullfights (adeegsigaan waxaa mamnuucay sharciyada Isbaanishka qarnigii 19aad).
Waardiye iyo difaac.
Maanta waxaa loo isticmaalaa maaraynta lo'da iyo ugaadhsiga oo keliya. Markaad shaqeyneyso, Alano Español waxay kuxirantahay qaniinyadiisa xoogga badan, adeecideeda iyo shaqsiyadeeda isku dheelitiran. Qabsashada daanka Alano Español wuxuu noqday halyeey. Aad ayey waxtar u leedahay maahan oo keliya sababta oo ah eeyadu waxay qaniiyaan iyagoo isticmaalaya daanka oo dhan, iyagoo ku celinaya xajinta jiirarka si joogto ah oo ay u ilaalinayaan muddo dheer, laakiin sidoo kale maxaa yeelay waxay sii deyn doonaan ugaadha markii loo sheego inay sidaa sameeyaan. Siideynta ayaa muhiim u ah sida heynta marka aad la shaqeyneyso eeyaha. Aaladaha Alano qaarkood waxaa ka mid ah dhaqashada, ugaadhsiga, raadraaca, ilaalinta, ilaalinta, shaqada booliska, Schutzhund, culeyska jiidaya, u hoggaansanka tartanka iyo deg degga.
Waxaa jira ururo kale oo dhowr ah oo ka shaqeynaya ictiraafkeeda, kuwaas oo dhowaan ka dhici doona heer maxalli ah Isbaanish.
Eeg tusaalooyin badan oo ah Alano Español
Alano Español Sawirada 1
Alano Español Sawirada 2
Alano Español Sawirada 3
Waad ku mahadsan tahay Javier Astorga Vergara bixinta macluumaadka Dog Taranka Macluumaadka. Booqo Isbaanishka Alanos Del Castillo de Encinar.
Sidoo kale mahad gaar ah Melanie Matthews.
Macluumaadka Taranka Eeyaha Utonagan iyo Sawiro
Macluumaadka Taranka Eeyaha Azawakh iyo Sawiro
Macluumaadka Muuqaalka Eeyaha ee Pakistani Mastiff iyo Sawirro
Macluumaadka Taranka Eeyaha ee loo yaqaan 'Cur Cur Dog' iyo Sawirro
Macluumaadka Taranka Noolaha ee Bullboxer Pit Dog iyo Sawirro
Sawirada Jilicsan ee Dahaarka leh Qamadiga Terrier Dog Sawirada, 3
Macluumaadka Taranka Eeyaha ee Chinaranian iyo Sawirro
Macluumaadka Taranka Eeyaha Sheprador ee Jarmalka iyo Sawiro
Laizhou Hong Dog Macluumaadka iyo Sawirada
roomaaniyiinta iyo bichon frize mix
pictures of eeyaha sahashan Alaska
images of muqisho Chow Chow
9 bilood jir retriever
bulldog american ah oo lagu qaso feedhyahan